Vaovao - Vaovaon'ny orinasa - Ireo vahiny Koreana Tatsimo dia nanamafy ny fifanarahana tongolo niaraka tamin'ny NCG
Tamin'ny 21 Janoary, nisy vondrona mpivarotra fanafarana sakafo any Korea Atsimo tonga tao NCG noho ny fantsona eo an-toerana ary niresaka momba ny kalitaon'ny vokatra, ny fenitra fanondranana, ny baiko ary ny fandefasana. Ireo mpivarotra Koreana Tatsimo dia nandeha namaky ny sehatra e-varotra NCG tsy miankina sisin-tany mba handinihana ny fampahalalana mifandraika amin'ny vokatra fambolena avo lenta, ary hifandray amin'ny NCG mandritra ny fotoana vitsivitsy hifampiresahana momba ny fifanarahana, ny roa tonta dia miaraka amin'ny fihetsika tia namana, mifampitady tombony, fifampitokisana, amin'ny farany, ny kaontenera 14 kaontenera indray mandeha, dia mahavita ny fanondranana vokatra tantsaha 300 taonina rehetra.
Tao amin'ny simposium dia nohazavainay tamin'ny an-tsipiriany ny fenitra momba ny kalitaon'ny vokatra fambolena Anqiu avo lenta, lozisialy sy fandefasana ary raharaha hafa mifandraika amin'izany, mifanaraka tanteraka amin'ny fandefasana ny fangatahan'ny mpanjifa. Amin'ny alàlan'ny seho an-tsehatra dia manohy mifandray bebe kokoa amin'ny fampandehanana ivelany ny sehatra izahay, ny fidirana amin'ny lampihazo, ny fandoavana entana ary ny raharaha hafa, maneho tanteraka ny tombony amin'ny serivisy mahomby sy ny fanajana mora ny sehatra e-varotra NCG.
Niresaka fatratra ny fomba fampandehanana ny sehatra e-varotra NCG miampita sisintany ireo vahiny Koreana. Nandritra izany no nanehoan'izy ireo ny fanantenana hitazona ny fifandraisana maharitra amin'ny NCG ary hametraka fototra ho an'ny fiaraha-miasa sy fifanakalozana bebe kokoa amin'ny ho avy. Ity fiaraha-miasa ity dia mampiseho tanteraka ny tombony amin'ny sehatra e-varotra NCG. Amin'ny alàlan'ny Internet, Big Data ary teknolojia fampahalalana maoderina hafa, hampiroboroboana am-pahavitrihana ny fanondranana ireo vokatra avy amin'ny fambolena mba hahitana fanavaozana haingana. Ny e-varotra miampita sisintany dia mbola hanohy hanome tosika vaovao ny varotra iraisam-pirenena momba ny vokatra fambolena.